1. Igama lomkhiqizo / isidlaliso:
I-Epoxy ucingo camera anezikhala, i-epoxy coating mesh, i-electrostatic coating mesh, i-hydraulic filter protection mesh, i-hydraulic filter mesh, i-hydraulic filter mesh, i-filter support mesh, i-epoxy window screen mesh.
Ukwethulwa okuningiliziwe komkhiqizo:
Izindwangu ze-epoxy camera wiremesh zisetshenziselwa ikakhulukazi ungqimba lokusekelwa kwezihlungi ze-hydraulic / air kanye nezinto zokuhlunga. Amanetha e-epoxy asetshenziselwa ikakhulukazi izikrini zokulwa nokweba ezindaweni zokuhlala ezisezingeni eliphakeme. Ukubumba kwaso ukumunca i-epoxy mesh resin powder ebusweni bocingo olubunjiwe oluvela ezigabeni ezahlukahlukene zensimbi ngokusebenzisa i-electrostatic spraying. Ngemuva kokushisa nesikhathi esithile, i-epoxy resin powder iyancibilika futhi imbozwe ebusweni be-substrate ukuze yenze ukugoqa okuvinjiwe kokuVikela. Imvamisa i-substrate inezikhala zensimbi engagqwali, i-aluminium alloy mesh, i-carbon steel mesh. I-epoxy resin powder ifaka uhlobo lwangaphakathi noma lwangaphandle, olungenziwa ngezifiso futhi luthuthukiswe ngokuya ngezidingo zamakhasimende (kufaka nemibala ethile).
3. Izici zomkhiqizo:
Ngemuva kokulungiswa kwendawo, iphoyinti lokuxhuma selilungisiwe, i-mesh iyunifomu futhi iyisikwele, i-warp ne-weft zimile mpo, akulula ukukhulula nokukhubazeka, futhi amandla okuxhasa ayaqiniswa; indawo enezikhala ithambile futhi kulula ukuyakha; ingakha imibala ehlukene ebusweni, umbala uyindilinga futhi uyunifomu.
Isine. Izinzuzo zomkhiqizo:
I-Ansheng ine-laboratory ephelele yokulingisa ukusebenza komkhiqizo, kufaka phakathi ukuhlolwa kwefilimu ukuqina, ukuhlolwa kobunzima bepensela, ukuhlolwa kasawoti, ukuhlolwa kwe-powder, ukuhlolwa kokukhathala, ukuhlolwa kokumelana no-oyili, njll. Kusetshenziselwa ikakhulukazi ukuhlolwa kwe-epoxy resin powder impahla engenayo, imikhiqizo Inqubo yokuhlolwa kwekhwalithi, nokuhlolwa kokuthuthukiswa komkhiqizo okusha, ikhwalithi yomkhiqizo ingalawulwa.
Ngasikhathi sinye, i-YKM inezintambo ezimbili zokukhiqiza ukwelashwa komhlaba ezihola phambili ngokuzimela. Isebenzisa ukukhiqizwa kwemodi yokusakaza imodi eshisayo ye-infrared negesi yemvelo. Inezici zokukhululwa kokushisa okuzinzile, ukufana, ukuphatha kalula, ukuvikelwa kwemvelo, njll, futhi amandla wokukhiqiza angafinyelela ku-50,000 m2 / Okukhiphayo ngonyaka kungaba yizigidi eziyi-15 m2 ngosuku. Inezinsiza zokukhipha igesi ezihlangabezana namazinga okukhishwa kule minyaka eyi-10 ezayo, isekela amakhono wokucutshungulwa kwangemuva njengama-slitters, ama-slicers, ama-splicers, kanye nemishini yokunitha yokuqala eyi-30 eshesha kakhulu.
1. Kuyamelana nokucwiliswa kukawoyela nokugqwala. Ingavivinywa yimikhiqizo ehlukahlukene yemithombo ye-oyela wokubacindezela emhlabeni jikelele emazingeni okushisa ahlukahlukene nezikhathi, futhi indawo yokumboza ayinalo ushintsho. Ifanele ukushisa okuphezulu nokucindezela okuphezulu imikhiqizo yesihlungi se-hydraulic.
2. Ukumelana nesimo sezulu, ngokuya nge-ASTM B117-09 test spray standard, ukuhlolwa okuqhubekayo kwendawo yokumboza engu-96H ngaphandle koshintsho, efanelekayo okokuhlunga komoya ezindaweni ezinzima nezindawo ezingaphandle;
3. Ukunamathela okuqinile, kungadlula ukuhlolwa kwebanga le-H grade, ukuhlolwa komthelela ongu-1kg / 50cm, ukuhlolwa kokunquma, ukuhlolwa kokulwa nokukhathala;
4. Ukuphakama okugoba okuphezulu, kungasongwa ngenduku yensimbi enendawo engaphezulu eyi-1mm, ngaphandle kwemifantu ebusweni;
5. Ngemuva kokuthi umkhiqizo ushibilikile, umphetho wocingo onqenqemeni ngeke uwe ngemuva kokuhlukaniswa kwefilimu, futhi ukunamathela kwephoyinti lokuhlanganisa okuhlanganayo kungafinyelela ku-0.7kg.